उमेर नपुग्दै कपाल फुल्यो ? : गम्भीर शारीरिक समस्या पनि हुन सक्छ ! | Ratopati
फुलेको कपाल रङ्ग्याउनतिर नलागौं– उपचारतिर लागौं !
personटुना भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeमाघ १२, २०७६ chat_bubble_outline0
#प्रा.डा. धर्मेन्द्र कर्ण#सेतो कपाल